प्रत्यक्ष कर्सर खुला/बन्द
सम्पादन - सीधा कर्सर मोड छान्नुहोस्
सिधा कर्सरले तपाईँलाई कुनै पनि खाली क्षेत्रमा क्लिक गर्न अनुमति दिन्छ स्थान गर्नलाई जुन लागू हुन्छ पाठमा, छविहरूमा, तालिकाहरूमा, फ्रेमहरूमा, र अन्य वस्तुहरूमा.
यदि तपाईँले प्रत्यक्ष कर्सर मध्य बायाँ र दायाँ सीमान्त पृष्ठ वा तालिका कक्षको बीचमा राख्नु भयो भने, पाठ जुन तपाईँले घुसाउनु भएको थियो त्यो मध्य हुन्छ. उही प्रकार, पाठ दायाँ-सीमान्त हुन्छ जब सिधा कर्सर दायाँ-सीमन्तमा राखिन्छ.
स्वत: निर्माण उपकरणले स्वचालित तरीकाले खाली अनुच्छेदहरू, ट्याबहरू, र खाली स्थानहरू जुन प्रत्यक्ष कर्सरबाट घुसाइएको थियो हटाउँदछ. यदि तपाईँ प्रत्यक्ष कर्सर प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, स्वत निर्माण उपकरणलाई असक्षम बनाउँनुहोस्.
प्रत्यक्ष कर्सरले ट्याबहरू कर्सरमा अवस्थित गराउँदछ. यदि तपाईँले पछि ट्याब परिवर्तन गर्नुभयो भने. पृष्ठमा भएको पाठको स्थान पछि परिवर्तन हुन सक्छ.